Dhaqaalaha qoysku oo saameyn ku leh waxbarashada ardayda dugsiyada sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Martin Arvebro/Sveriges Radio
Dhaqaalaha qoysku oo saameyn ku leh waxbarashada ardayda dugsiyada sare
La daabacay fredag 21 februari 2014 kl 12.49
Waxaa daraasad laga sameeyey gobolada Sörmland, Västmanland, Örebro iyo Östergötland lagu muujiyey in xaaladda bulshadeed iyo dhaqaale ay saameyn weyn ku leedahay in carruurtu sii wadaneyso waxbarashada sdugsiyada sare iyo in kale.
Balse waxaa halkaas ka muuqata in asalka jinsiyeec ee ilmuhu aysan wax saameyn ah ku lahayn, haddii uusan ilmahaasi ahayn mid markaas Iswiidhen soo galay. Sidaasna waxaa yiri Fredrik Sunnergren oo daraasadaan wax ka soo sameeyey:
- Waxaa daraasadaan nooga muuqata in aysan carruurta ajnebigu ka natiijo xumeyn kuwa iswiidhishka ah marka ay dugsiyada wax ku baranayaan.
Waxaase daraasadaas ka muuqata bey’adda bulshadeed iyo xaaladda dhaqaalaha ee ilmuhu ku nool yahay ay saameyn weyn ku leedahay. Sidaasna waxaa sheegtay Carina Johansson oo ka tirsan xisbiga Folkpartiet isla markaasna xubin ka golaha ururka degmooyinka gobolka Östergötland:
- Ilmaha ugu nasiibka xun waa ilmaha la nool waalid waxbarashadiisu hooseyso oo dakhliga hoose soo galo ama kaalmo dhaqaale ka helay xafiiska gargaarka bulshada, kuna nool guri ka mid ah guryaha la kireysto oo ku yaal xaafadaha lagu dhisay barnaamijka halka milyan. Kolkaas waxaa aad u liita fursadaha looga soo dhalaalayo waxbarashada dugsiyada, ayey tiri Carina Johansson.
Daraasaddaan waxaa lagu sameeyey ardayda dhigata dugsiyada ku yaal kontameeyo degmo ka kala tirsan gobolada Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro iyo Västmanland, waxay ku saabsan ardaydii bilowday dusgiyada sare intii u dhexeysey sannadihii 2004 iyo 2008.
Isha: SR Sörmland